RASMI: Goolhaye Petr Cech oo ku dhawaaqay inuu ka fariisanayo Kubbada Cagta – Gool FM
RASMI: Goolhaye Petr Cech oo ku dhawaaqay inuu ka fariisanayo Kubbada Cagta
(Arsenal) 15 Jan 2019.Goolhaayaha reer Czech iyo kooxda Arsenal ee Petr Cech ayaa wuxuu ku dhawaaqay inuu ka fariisan doono kubbada cagta marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan.
Petr Cech ayaa ku soo qoray bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka fariin uu kaga hadlayay xiliga uu soo gaba gabeyndoono mustaqbalkiisa ciyaareed ee kubada cagta wuxuuna yiri:
“Xili ciyaareedkan waa keygii 20-aad ee xirfadeyda ciyaaryahan ahaan, waxaa ka soo wareegtay 20 sano, tan iyo markii aan saxiixay qandaraaskeygii ugu horeeyay ee xirfadeyda”.
“Sidaas darteed waa waqtigii ugu fiicnaa ee aan ku dhawaaqi lahaa inaan ciyaaraha ka fariisan doono dhamaadka xilli ciyaareedkan”.
“Inaan ka ciyaaro mudo dhan 15 sano horyaalka Premier League, isla markaana aan ku guuleysto koobab dhaxal gal ah, ayaa iga dhigeysa inaan dareemo, in aan wax walba ku guuleystay”.
“Waxaan sii wadi doonaa inaan si aad ah u shaqeeyo, si aan kooxdeyda Arsenal ugu caawiyo inay ku guuleysto koob xili ciyaareedkan, kadibna waxaan rajeynayaa inaan diirada saari doono noloshayda, ka baxsan gudaha garoonka”.
Petr Cech ayaa u soo ciyaaray kooxdiisii horey ee Chelsea inta u dhexeysay 2005 ilaa iyo 2015, kahor inta uusan u dhaqaaqin Arsenal, wuxuuna mudadaas kula soo guuleystay koobab badan ay ugu muhiim sanaayeen 4 jeer ee ah Premier League iyo 1 jeer ee ah Champions League.
Klopp oo la kulamay wararkii ugu xumaa kahor kulanka soo aadan ay ciyaari doonto kooxda Liverpool
KA BOGO: Koobabka uu ku guuleystay iyo Rikoodhadii Gaarka ahaa uu sameeyay Goolhaye Petr Cech kaddib markii uu ku dhawaaqay inuu Ciyaaraha ka fariisanayo....+SAWIRRO XUL AH